Waxay ku kacaysaa Samsung kaliya 225 euro inay sameyso mid kasta oo ka mid ah Galaxy S7 | Wararka IPhone
Waxay ku kacaysaa Samsung kaliya 225 euro inay sameyso mid kasta oo Galaxy S7 ah
Miguel Hernández | | Android, Tartanka
Samsung Galaxy S7 waxaa ka dhacay buuq fara badan, maadaama aysan ka yaraan karin aalad shaki la’aan calaamadda u ah kuwa u adeegsada Android nidaamka qalliinka. Qiimaha sare ee qalabka ayaan ka hor imaanaynin iibka oo u muuqda guul caalami ah. In kasta oo uu adeegsaday nashqad aad u muxaafid ah marka la barbar dhigo tusaalihii hore, haddana Samsung waxa ay mar kale muujisay in ay ku socoto waddada saxda ah markay tahay soo saarista. Si kastaba ha noqotee, waxaan inta badan jecel nahay inaan wax yar ka ogaanno kharashyada iyo faa'iidooyinka. Waxaan tirineynaa sida dhabta ah ee ay ugu kacayso Samsung samaynta Galaxy S7.
Sidaad ogtahayba, aaladda waxaa lagu iibinayaa tusaale ahaan dalka Mareykanka 670 doolar, dhanka kale, waxaad layaabi doontaa inaad ogaato inay Samsung ku kacayso "kaliya" 255 doolar soo saarida aaladahaas. Qaab fudud ayaan ku rumaysan karnaa in Samsung ay ku kasbato qalab kasta 415 doolar oo nadiif ah, laakiin xaqiiqadu aad ayey uga duwan tahay, waana inaynaan ku darin kharashyadan R&D, gaadiidka, mushaaraadka ganacsatada, xayeysiinta ama canshuuraha. Si kastaba ha noqotee, shaxanka ayaa wali ah mid la yaab leh jaleecada hore, sida wax kasta oo ku xeeran qalab heer sare ah sidan oo kale.
Aynu kala jabinno qiimaha qaybaha ugu muhiimsan:
Qualcomm Snapdragon 820 = $ 62
Kaamiro = $ 13,80
Isku soo duub qalab kasta = $ 5
Kuwani waa qaar ka mid ah qaybaha ay IHS shaaca ka qaaday xagga qiimaha, hase yeeshe faa'iidooyinka weligood iyo ma noqon doonaan wadar, waxaa jira dhinacyo badan oo go'aamin doona faa'iidada ugu dambeysa ee ka fogaan doonta inay ahaato $ 415, laakiin ma noqon doonto in ka yar 100 doolar shaki la’aan. Way fiicantahay in la ogaado inta qalabku runti ku kacayo iyo inta ay aakhirka naga qaadaan, silsiladda wax soo saarka ee taleefannadan ayaa aad u ballaaran si loo dhimo qiimaha noocan oo kale ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Waxay ku kacaysaa Samsung kaliya 225 euro inay sameyso mid kasta oo Galaxy S7 ah
caadi in ay isaga ku kacayso in ...
Samsung waxay sameysaa shaashadeeda, xusuusta, processor Exynos, dareeraha ...
Maxay kuugu qaalisan tahay inaad ku dalbato pizza pizzeria ama aad adigu sameysato?
Waa hagaag, taasi waxay ku dhacdaa tufaax aan waxba ka qabanaynin qalabkeeda, waxay wax walba u naqshadeysaa dibadda ... waana sida ay noogu musmaaraan!
Apple Music waxay haysaa xuquuqda Isku-darka iyo Isku-darka DJ
Weli waa xilli hore, laakiin waa kuwan sawirradii ugu horreeyay ee kiiska iPhone 7?